I-Indian Visa yabakhenkethi-Isikhokelo seNdwendwe kwiAgra
Kule poso sigubungela izikhumbuzo ze-Agra ezidumileyo nezaziwayo, nakwizona zingadumanga. Ukuba uyeza I-Visa yaseIndiya Njengabakhenkethi, oku kubonelela ngesikhokelo esipheleleyo kwiAgra kwaye kubandakanya iindawo ezifana neTaj Mahal, Jama Masjid, I-Itimad Ud Daulah, iAgra Fort, iMehtab Bagh, Ivenkile, iNkcubeko kunye neendawo zokutya.
I-Agra yeyona ndawo idume kakhulu kwizixeko zamaIndiya phakathi kwabakhenkethi bangaphandle ngenxa yemabula entle mausoleum NguTaj Mahal lowo uninzi olufana neIndiya uqobo. Kananjalo, esi sixeko yindawo enkulu yabakhenkethi kwaye ukuba ukwiholide eIndiya ngokuqinisekileyo sisixeko ekungafanele ukuba uphoswe kuko. Kodwa kuninzi kakhulu kwi-Agra ngaphandle kweTaj Mahal kwaye ukuze uqiniseke ukuba unamava onke ajikeleziweyo esixekweni silapha kunye nesikhokelo esipheleleyo seAgra kubakhenkethi. Oku kunayo yonke into ekufuneka uyenzile kwaye uyibone ngelixa use-Agra ukuze ube nexesha elimnandi apho kwaye wonwabele utyelelo lwakho.
Urhulumente waseIndiya ibonelele ngendlela yanamhlanje yokusetyenziswa kwe-Indian Visa Online application. Oku kuthetha iindaba ezimnandi kubafakizicelo njengoko iindwendwe eziya eIndiya zingasafuneki ukuba zenze ityelelo lokuya kutyelelo lwasezandleni kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya okanye kwiOfisi yaseIndiya kwilizwe lakho.
IiMonerals ezidumileyo zeAgra
Njengoko isixeko esilikomkhulu ngexesha likaMughal Agra sinokubaluleka okukhethekileyo kwimbali. Ukususela kwixesha lolawulo luka-Akbar ukuya kwi-Agra ye-Aurangzeb waqokelela inani elikhulu lezikhumbuzo Zonke ezi zinto zibonakalisa ulwakhiwo olothusayo lubonwa naphi na emhlabeni, kwaye ezinye zazo zinesimo sokuba Iindawo zeLifa leMveli le-UNESCO. Okokuqala kwezi zikhumbuzo kufuneka uzityelele ngokucacileyo yiTaj Mahal ukuze ubone ukuba yintoni le ingxabano. Eyakhelwe ngu-Mughal Emperor u-Shah Jahan ngenxa yomfazi wakhe u-Mumtaz Mahal emva kokubhubha kwakhe, le yenye yezona ndawo zidumileyo e-India. Kuya kufuneka uphinde undwendwele iMyuziyam yaseTaj ngaphakathi kweTaj Mahal complex apho uza kufumana khona izinto ezinomdla malunga nokwakhiwa kwesikhumbuzo. Kodwa zintle nje nezinye izikhumbuzo eAgra, ezinjengeAgra Fort, eyakhiwa yiAkbar ngenjongo yokuqinisa kwaye inkulu ngokwaneleyo ukuba ingabizwa ngokuba sisixeko esineendonga ngaphakathi kuyo, kunye neFatehpur Sikri. isixeko esinqatyisiweyo esakhiwe ngu-Akbar kwaye siqulathe nezinye izinto ezininzi ezikhumbuzo ezifana neBulund Darwaza kunye neJama Masjid.
Ezinye zeZikhumbuzo eziNqabileyo kwiAgra
Into malunga ne-Agra kukuba akukho kunqongophala kwamatye ezikhumbuzo anezakhiwo ezothusayo apho kodwa ezinye izikhumbuzo zendalo zidume kakhulu kunezinye kwaye ngenxa yoko zihlala zibakhenkethi. Kodwa ukuba uyayazi enye Izikhumbuzo ezingaziwayo kwiAgra Kufanelekile ukuba undwendwele emva koko uya kufumana uxabiso oluphezulu nangakumbi ngobuhle nokubaluleka kwesi sixeko. Ezinye zezi yiChina ka Rauza, isikhumbuzo se-Nkulumbuso ka-Shah Jahan ogama iithayile zakhe ezibengezelayo kuthiwa zithunyelwe zivela e-China; I-Anguri Bagh, okanye iGadi yeeDiliya, eyakhiwa njengegadi ye-Shah Jahan, kwaye intle kuyilo lwejometri yayo; kunye neTomb ka-Akbar ebaluleke kakhulu njengendawo yokuphumla yeAkbar kodwa nangenxa yokuba nayo ingumsebenzi wobugcisa oyilo kwaye ukwakhiwa kwayo kwakujongwa nguAkbar ngokwakhe ngaphambi kokuba asweleke.
Xa ungena kwi-Agra kwaye uphonononge i-patios ezininzi, uyaqonda ukuba i-Agra yenye yezona zinto zintle ze-Mughal eIndiya. Eli lithephu libomvu lesanti kunye nobunjineli bemarble oks amandla kunye nokugcwala. Isithuba se-Agra ikakhulu saqalwa ngu-Emperor Akber ngonyaka ka-1560s njengengqokelela yomkhosi emva koko yatshintshwa yaya kuba yinqaba ngumzukulwana wakhe u-Emperor Shah Jahan. Izikhumbuzo kunye nezakhiwo eziphawulekileyo kwimbali yaseMughal ziseyinxalenye yale nqaba, umzekelo, iDiwan-e-aam (Iholo labantu abaninzi), iDiwan-e-khaas (Iholo labantu abazimeleyo) kunye noShish Mahal (I-Mirror Palace) . Indlela yokungena ye-Amar Singh, ebisetyenziselwe ukwenza impazamo ngokuchaseneyo nokumisela kwayo inyanzelo, okwangoku yeyona njongo iphambili yokungena kulwakhiwo.
Tomb ye-Itimad Ud Daulah
Eli ngcwaba lizingca ngokuba lelokuqala ekwenziwe ngamatye amhlophe endaweni yeselitye elibomvu, elaligunyazisa ngokungagungqiyo kwilitye lesanti elibomvu kuMnjineli kaMughal.
U-Itimad-ud-Daula ngoku ubizwa ngokuba "ngumntwana weTaj" okanye uyilo lweTaj Mahal, njengoko yakhiwe ngokulinganayo okuchongiweyo kunye ne-pietra dura (umsebenzi osikiweyo wamatye) uhombise amacebo.
Eli ngcwaba lijikelezwe zizithole ezinqwenelekayo ezenza ukuba ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokungafumani kunye nokudibana nobukhulu bexesha lakudala elalinobutyebi ekusebenzeni, kwinkcubeko nakwimbali.
Ikati yexesha elizayo iboniswa njengebhokisi ye-gem okanye i-Taj yentsana kwaye kuthiwa isakhiwo sasetyenziswa njengesixhobo sokuzoba seTaj Mahal. Ungabona imizekeliso embalwa kubandakanya ubusuku, iitawuli kunye nequla elide kwindlela eya engcwabeni. Ingcwaba lijonge ngaphaya koMlambo i-Yamuna kwaye ndafumana i-nurseries yindawo engaqhelekanga yokufihla emthunzini ukuze kubekho ukuzwana kwaye izolile kude neendlela eziphithizelayo. Ipaseji yayiziidola nje ezimbalwa ukanti ii-tripods zazingavunyelwe ngaphakathi.
I-Taj Mahal iphantse yabonakala ngathi iyolula ngaphezulu koMlambo iYamuna eMehtab Bagh (iNyanga yeNyanga yeNyanga), indawo enesikwere eqikelela ukuba ziimitha ezingama-300 kwicala ngalinye. Yeyona paki iphambili ekuqhubekeni kokulinywa okwakhiwa kweshumi elinambini likaMughal kuloo mmandla.
Iziko lezolonwabo linemithi eqhakaza ngokupheleleyo kunye nezihlahla eziphuculweyo eziphucukileyo ukusuka kwimeko yayo phakathi kwiminyaka ye-1990, xa isiza sasiyinduli yesanti kuphela. Uphando lwe-Archaeological of India lusebenza ngenkuthalo ekumiseni kwakhona iMehtab Bagh kubuqaqawuli bayo obukhethekileyo ngokutyala izityalo zexesha likaMughal, emva koko, inokuba yimpendulo ka-Agra kwiCentral Park yaseNew York.
Indawo ihlangana ngokungathandabuzekiyo kunye neeladi zeTaj, zenza ukuba yeyona ndawo intle kwiAgra yokufumana umbono (okanye ifoto) yesakhiwo esimangalisayo-ngakumbi ngokuhlwa. Ngaphandle kwendlela yokungena kwingqondo ebambekayo, ungakhangela iiteknkick zeTaj Mahal kunye nezipho ezahlukeneyo ezivela kubathengisi abakummandla.
I-Agra ayaziwa nje ngezikhumbuzo zayo. I-Agra inelifa elityebileyo lenkcubeko. Kukho umnyhadala okhethekileyo owenzeka e-Agra obizwa ngokuba yi-Taj Mahotsav oqhubeka iintsuku ezili-10 zizonke. Amagcisa kunye namagcisa avela kulo lonke ilizwe laseIndiya eze emkhosini ukubonisa ubugcisa bawo, ubugcisa, umdaniso, ukutya, njl njl. Abakhenkethi bangaphandle abanomdla wokufumana ezinye ze Inkcubeko yabantu baseIndiya kufuneka iqinisekise ukuba iya kulo mthendeleko kwaye ukutya kungathanda kakhulu kuba kuthanda ukutya okwenyani okuza kubakho apha. Abantwana baya kuba nakho ukonwabela umthendeleko lowo uhlala ubekwa indawo eyiFood Fair.
Inani labakhenkethi elihamba lisiya e-Agra ngawo onke amaxesha onyaka, akunakufane kwenzeke ukuba likubekho ukunqongophala kweendawo zokuthenga kunye neearara ezichazwe ikakhulu kubakhenkethi. Ungafumana izipho ezincinci kunye neebhlogo zokuthatha ubuye kunye nawe, njenge replicas ezincinci zeTaj Mahal ezenziwe ngamarble. Uya kufumana kwakhona inani elingapheliyo levenkile ezithengisayo ubuciko bokwenyani kwiAgra kwaye kuneentengiso zento yonke, ukusukela ubucwebe, iirobhothi, ukuhonjiswa nokuhanjwa. I amaziko athandwayo okuthenga kunye neeVarars zeAgra onokundwendwela yiSadar Bazaar, Kinari Bazaar kunye neMunro Road.
I-Agra yaziwa kakhulu ngokutya okumbalwa, okufana ne-Petha, enencasa eyenziwe ngethanga, kwaye inokufumaneka kwiSadar Bazar, Dholpur House naseHari Parvat; Idalmoth, engumxube oqholiweyo kunye nosawoti weelenji kunye namandongomane, kwaye unokufumaneka ePanchi Petha naseBaluganj; iintlobo ezahlukeneyo zeParathas; UBedhai noJalebi, oku kukutya kwesitalato eAgra; kunye ne-Chaat, yona idume kakhulu e-Agra, kwaye olona Chiko luLungileyo lunokufumaneka kwi-Chaat Wali Gali e-Sadar Bazar. Nazi ezinye ukutya esidumileyo kweAgra ngokuqinisekileyo kufuneka uzame ngelixa undwendwela umzi.
Ukuba uceba ukutyelela iIndiya, unokufaka isicelo seVisa yaseIndiya kwi-Intanethi apha kwaye ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye ufuna naluphi na ingcaciso kufuneka unxibelelane nedesika yethu yoncedo ngenkxaso kunye nesikhokelo.